Betsaka ireo mitondra faisana vokatr’izany raha ny nambarany. Lohalaharana amin’ireny ny mpanjifa, indrindra fa ireo mpianatra mandeha mamonjy sekoly isa-maraina izay efa nanaovan’izy ireo fanentanana manokana ny amin’ny tokony hifohazan’izy ireny maraina isan’andro. Fa ankoatra izay hoy Randriambao Jacky dia tena mijaly koa ny mpitatitra. Mahatratra ora iray mantsy izy ireo no mijanona amina toerana iray rehefa tena mamely ny fitohanana hany ka toro 2/3 –n’ny tokony hataon’ny fiara iray no very mandritra ny tontolo andro. Tsy afa-manoatra anefa izahay hoy hatrany ity tompon’andraikitra ity fa tsy maintsy miharitra. Na izany aza anefa hoy izy rehefa tena mikatso ny fiara dia miresaka amin’ny mpitandro ny filaminana izy ireo ka manova lalana kely amin’ny am-pahany fa tsy izy iray manontolo akory. Mikasika ny lalana etsy Besarety manokana dia notsindriany fa tsy mampiasa io lalana io intsony ny koperativa tselatra raha vantany vao ny orana satria maro ireo fiaran’izy ireo efa maty tao.